भक्तपुरको द डेन्टल सिटीका निर्देशक झा बिहानै यस्तो ‘सुसा’इट नोट’ लेखेर बेप’त्ता – PathivaraOnline
Home > समाचार > भक्तपुरको द डेन्टल सिटीका निर्देशक झा बिहानै यस्तो ‘सुसा’इट नोट’ लेखेर बेप’त्ता
भक्तपुरको द डेन्टल सिटीका निर्देशक झा बिहानै यस्तो ‘सुसा’इट नोट’ लेखेर बेप’त्ता
admin November 10, 2020 November 10, 2020 समाचार	0
काठमाडौ । भक्तपुरवाट एक जना ब्यक्ति आफ्नो परिवारलाई फोन गरेर सु’सा’इड नोट समेत लेखेर हराएका छन् । भक्तपुरको द डेन्टल सिटीका निर्देशक डा। दिगम्बर झा मंगलवार विहानै देखि सम्पर्क विहिन भएका हुन् । उनले परिवारका नाममा नोट पनि लेखेका छन् । परिवारसंग राम्रो सम्बन्ध नभएका उनले पारिवारीक कारणले नै आफ्नो जिवन त्याग गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नोट लेखेका छन् ।
मंगलबार बिहान ५ बजे उनले परिवारलाई फोन गरेर आफुले त्यस्तो निर्णय गर्न चाहेको पनि उनले बताएको प्रहरीले जनाएको छ । पछि उनीहरुले झा ले लेखेको नोट पनि फेला पारेका थिए । डा। झाको बुबा–आमा र दिदी–बहिनीसँग सम्बन्ध राम्रो नरहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानवाट खुलेको छ । उनले आफुले परिवारकै कारण मृ त्यु रोजेको पनि नोटमा लखेका छन् ।
उनी बा १६ च ८६८९ नम्बरको कार लिएर गएका र उनी कार सहित हराएका हुन् । प्रहरी श्रोतका अनुसार काभ्रेको पनौती पुगेपछि उनको मोवाइल अफ भएको देखिएको छ। परिवार, आफन्त तथा प्रहरीले उनको खोजी कार्य तीव्र बनाएका छन्।
मोटरसाइकमलले ठक्कर दिएपछि एक महिलाकाे निधन
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका श्रीमान श्रीमतिको एकै चितामा हालेर यसरी गरियो अन्तिम संस्कार
के तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ? घरमै बसीबसी श्रीयाेगले यसरी दिनेछ जागिर खाने अवसर – सेयर गराैं
गौशाला बाट आयो यस्तो खबर , जेठाजु बुहारीको लागि यस्तो लिला !!
नेतालाई भ्रष्टाचार सिकाउने गुरु कर्मचारी हुन्